Breaking News : प्रमोद खरेलले दिएको उजुरीको आधारमा विन्ध्यवासिनी म्युजिककी कार्यकारी अधिकृत प’क्रा’उ ! – " कञ्चनजंगा News "
Breaking News : प्रमोद खरेलले दिएको उजुरीको आधारमा विन्ध्यवासिनी म्युजिककी कार्यकारी अधिकृत प’क्रा’उ !
No Comments on Breaking News : प्रमोद खरेलले दिएको उजुरीको आधारमा विन्ध्यवासिनी म्युजिककी कार्यकारी अधिकृत प’क्रा’उ !
प्रतिलिपि अधिकार हनन् गरेको उजुरीका आधारमा प्रहरीले विन्ध्यवासिनी म्युजिककी कार्यकारी अधिकृत लेना शर्मा रेग्मीलाई प्र’m क्रा’उ गरेको छ । गायक प्रमोद खरेलले विन्ध्यवासिनी म्युजिकले आफ्नो प्रतिलिपि अधिकार हनन् गरेको भन्दै पुस २४ गते प्रहरीसमक्ष उ’जुm री दिएका थिए ।
“प्रm तिलिपि अधिकार हनन् गरेको उजुरीका आधारमा हामीले रेग्मीलाई प’m क्रा’उ गरेका हौं,” महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुका प्रवक्ता प्रमेश विष्ट भने, “अनुसन्धान सुरु भएको छ । प्रकृया अनुसार अगाडि बढ्छौं ।”
यसअघि गायक प्रमोद खरेललाई गाm लीगm लौज गरेको भन्दै विन्ध्यवासिनी म्युजिकका सञ्चालकलाई का’र’m बाहीको माग गर्दै ५७ जना गायक गायिकाले हस्ताक्षर गरेर महानगरीय प्रहरी परिसर टेकु काठमाडौंमा निवेदन दिएका थिए ।
११ वर्षअघि ‘प्रणय एल्बमका चार गीत तयार गर्दा गायक खरेल र कम्पनीबीच रोयल्टी लगायतका हिसाब किताबमा सम्झौता भएको थियो । गीत निर्माणमा सबै लगानी खरेलको थियो भने कम्पनीले उनलाई २ लाख १० हजार रुपैयाँ दिएको थियो ।
केही समयअघि कम्पनीले गीतको कm पिराइट आफ्नो नाममा रहेको भन्दै कम्पनी रजिष्टारमा उ’जुm री दिएको थियो । गायक खरेलले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मंचमा गाइरहेको आm ‘रो’प सहित १ करोड क्षm तिपूर्ति मागिएको थियो ।
तर, प्रस्तोता नेपाल समाजले कm पिराइट स्रष्टाको हुने भन्दै कम्पनीविरुद्ध विज्ञप्ती जारी ग¥यो । लगत्तै कम्पनीका प्रमुख सुवास रेग्मीले सामाजिक संजालमै संगीतकर्मीविरुद्ध आ’m क्रो’श पोखे । वि’वा’द चm ‘र्कँदै गएपछि संगीतकर्मीले प्रहरी गुm हारेका हुन् । प्रहरीले तथ्य र प्रमाण सहि भन्दै उm जुरी दर्ता गरेको संगीतकार संघका संरक्षक लक्ष्मण शेषले बताए ।
← गोरखा पुगेर कमल थापाले भनेः ताजा जनादेशमा जानु उपयुक्त विकल्प → मलाई बचाउनुहोस् …. २१ बर्से नेपाली चेली जिबन र मृ*त्यु संग लडिरहेकी छिन् .. ( भिडियो सहित )